Plasma Virus Cleaner (Socket Type) – UniqueHMS
Plasma Virus Cleaner (Socket Type)
Small Size: 51 x 70 x 53 mm – Up to 100 m3 Space Cover.
Compact Small size but Big performance.
Easy to mount on wall outlets or multi-tap
Easy to carry, good mobility and convenient use by adoptingaone -touch button switch.
Equipped with an automatic control circuit for plasma ozone generation depending on the size of the living space.
ဤ ထုတ်ကုန် ပလာစမာ ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်စက် (Wall Mounted) အမျိုးအစားသည် အိမ်အတွင်း၊ အိမ်အပြင်၊ ရုံးခန်း၊ ခန်းမ၊ ဟိုတယ်၊ အစည်းအဝေးခန်း၊ ဟောပြောပွဲခန်း၊ ဖျော်ဖြေရေးခန်းမ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ၊ မြေအောက်ရထား၊ ရထား၊ ဘတ်စ်ကား၊ ရေယာဉ်သင်္ဘော၊ ဓာတ်လှေကား၊ မီးဖိုချောင်၊ ရေချိုးခန်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဥယျာဉ်ခြံဝင်းများ၊ ပြင်ပဟောပြောပွဲခန်း၊ မွေးမြူရေး၊ မွေးမြူရေးခြံများနှင့် လူနေထူထပ်သောဧရိယာများ စသည့်နေရာများတွင် တပ်ဆင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
PrevPreviousPlasma Virus Cleaner (USB Type)
NextWhy we should choose the EASYFO Hotel Management System Software?Next